Dhammaan wixii ku saabsan iPhone ee ku jira iPhone News | News IPhone (Bogga 15)
Sida loo demiyo macruufka 9 animations aan JAILBREAK
Animations The ee nidaamka ka hawlgala macruufka waa qayb aasaasi ah oo ay bilicsanaanta. Isticmaalayaal badan ayaa ku faraxsan ...
Muxuu iPhone-kayga u joojiyay lacag bixinta maxaan sameeyaa?
IPhone-kaaga ayaa joojiyay lacag bixinta oo ma ogid waxa la sameeyo? Qoraalkan waxaan ku tusi doonaa sababta aysan iPhone wax lacag ah uga qaadin iyo sida loo xalliyo.
McAfee wuxuu sheegay inay jabsadaan iPhone 30 daqiiqo gudahood
Markii uu booday khilaafka u dhexeeya FBI-da iyo Apple, kaas oo ay hay'adda dawladu codsatay iyada oo loo marayo ...
Codsiga Pebble Time ayaa lagu cusbooneysiiyaa wararka
Codsiga rasmiga ah ee Pebble Time ayaa lagu casriyeeyay qaabab cusub oo ku saabsan adeegsadaha isticmaalaha iyo emojis.
Laba shirkadood oo sameeya taleefannada iPhone ayaa soo sheegaya dakhliga soo gala ee liita bishii Febraayo
Waxaan dhihi karnaa waa wax caadi ah waqtigan, laakiin laba shirkadood oo soo saare iPhone ayaa soo sheegaya bishii ugu xumeyd Febraayo ilaa 2014.
Waxaan kuu soo bandhigeynaa xalka dhibaatooyinka ugu caansan ee aad ka heli karto maalin ilaa maalin ka mid ah Dacwada
Craig Federighi sidoo kale wuxuu ka dhiibanayaa fikirkiisa FBI-da
Craig Feredrighi ayaa FBI-da ku soo oogay dacwad uu ku qoray wargayska Washington Post.
Waxay bilaabaan inay sii daayaan fiidiyowyo falanqeynaya iska caabbinta biyaha ee Samsung Galaxy S7 Edge cusub marka loo eego iPhone 6s Plus.
Bedelida DNS waxay hagaajin kartaa xawaaraha aad internetka ku dhex maraysid. Waxaan sharaxeynaa sida loo sameeyo.
Twitter, Airbnb iyo Square ayaa ah kuwii ugu dambeeyay ee Apple ka taageera FBI-da
Twitter, Airbnb iyo Square waxay soo bandhigeen taageeradooda rasmiga ah iyo tan rasmiga ah ee booska Apple uu ka qaatay codsigii FBI.
Weerar cusub ayaa u oggolaanaya in laga xado furayaasha sirta ah ee ka socda Android iyo noocyadii hore ee iOS
Weerar cusub ayaa la sii daayay kaas oo u oggolaanaya in xoogaa xog ah laga xado aalado wata noocyadii hore ee iOS iyo, dabcan, aaladaha Android.
Oculus kuma shaqeyn doono Mac "illaa ay ka sameeyaan kombuyuutar fiican"
Aasaasihii Oculus VR wuxuu aaminsan yahay in aaladaha Apple ee Mac-ga aysan ku filneyn inay taageeraan xaqiiqadiisa muuqaalka ah
Hackers ayaa xaqiijinaya inuu jiro Jailbreak loogu talagalay iOS 9.3
Koodhka caanka ah ee "qwertyuiop" ee loo yaqaan 'Jailbreak iOS 9.3' wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo beta-kii shanaad ee ay sii daayaan Apple.
Kiisaska ugu horreeya ee iPhone SE ayaa muuqda
Soo-saarayaashu waxay bilaabeen inay soo bandhigaan kiisas difaac ah oo loogu talagalay iPhone SE oo aan isu dhigmin.
Wax soosaarka soo socda ee Apple waxay noqon doonaan kuwa quusin kara mahadnaqa HZO
Ma qiyaasi kartaa iPhone-ka aan biyuhu xirin oo aan naqshadiisu is beddelin? Qalabka dhegaha ee Bluetooth-ka oo aan biyuhu ahayn? Sida laga soo xigtay macluumaadkan, tani waxay noqon doontaa mid dhab ah sanadka 2016.
Sida loo beddelo muraayadda iPad Mini-gaaga
Waxaan kuu sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida loo bedelo dhalada iPad Mini, oo ah nidaam fudud oo fudud oo kuu ogolaanaya inaad lacag fiican keydiso
Maamulaha Fiat ayaa Apple kula taliyaya in uusan sameysan gaari
Sergio Marchionne wuxuu aaminsan yahay in Apple uusan soo galin adduunka mootada.
Miyuu xusuus ka maqan yahay iPhone-kaaga? Ku eedee WhatsApp
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee WhatsApp macno ahaan waxay kor u qaaddaa xusuusta keydinta ee iPhone-ka waxayna umuuqataa mid ka baxsan dayactirka.
IOS 9.3 ayaa ku ogeysiin doonta hadii maamulahaagu kormeero iPhone-kaaga
Injineerada Apple waxay ka faa’iideystaan ​​macruufka 9.3 si ay kuu ogeysiiyaan haddii maamulahaagu kormeero iPhone-kaaga.
Sida loola wadaago dukumiintiyada WhatsApp
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee WhatsApp waxay kuu ogolaaneysaa inaad dukumintiyada la wadaagto dadka kale waana sharxay sida loo sameeyo.
Ku rakib MAME4iOS adiga oo aan JAILBILBIL la Xcode
Waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo MAME4iOS bilaa jailbreak si aad ugu ciyaari kartid ciyaaraha MAME ee iPhone ama iPad gabi ahaanba bilaash.
WhatsApp hadda waxay kuu ogolaaneysaa inaad dukumiintiyada PDF-ga ah ka soo dirto iOS
Codsiga WhatsApp ee macruufka wuxuu horeyba kuu ogolaanayaa inaad dukumiintiyada PDF uga dirto iCloud, Dropbox iyo Google Drive toos.
Apple waxay bixin doontaa 1M iPhone kasta oo uusan ka fureyn Faransiiska
Wasaaradda Caddaaladda ee Faransiiska ayaa go’aansatay inay Apple ku ganaaxdo hal milyan oo Yuuro iPhone kasta oo uu diido inuu furo.
Xeer ilaaliyaha guud kuma qoyo Apple ama FBI midkoodna
Xeer ilaaliyaha guud kama qoyo Apple ama FBI midkood khudbadii ay ka jeedisay Congress-ka.
Apple waxay kireysaa warshad Pepsi ah si ay u tijaabiso Apple Car
Apple waxay dhowaan kireysatay 29.000 mitir oo bakhaar weyn ah oo ku yaal Sunnyvale gaariga Apple.
Hound, kaaliyaha ayaa yimid oo doonaya inuu la tartamo Siri
Waxaan kuu soo bandhigeynaa kaaliyaha codka dalwada awooda leh ee ujeedkiisu yahay inuu noqdo bedelka saxda ah ee Siri.
Agaasimaha FBI-da wuxuu u maleynayaa inay u isticmaali doonaan furitaanka sidii doorbid
Agaasimaha FBI wuxuu u maleynayaa inay adeegsan doonaan furitaanka iphone ee ku lug lahaa qaraxyadii San Bernardino inay tahay tusaale.
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa cashar ku saabsan sida loo wadaago sawirada Dropbox ama Google Drive adoo adeegsanaya WhatsApp.
Waxaan tijaabinay Samsung Galaxy S7 iyo iPhone 6s si aan u ogaano labadooda midka mobilada ugu fiican. Kee doorbideysaa
Apple Pay waxay imaan doontaa Brazil iyo Japan sidoo kale sanadkaan
Japan, Brazil, Singapore iyo Hong Kong ayaa ah dalalkii ugu dambeeyay ee ay Apple Pay imandoonto sanadkan 2016.
Sida loo rakibo 'Clash Royale' hadda iPhone-kaaga, iPad ama iPod Touch
Weli waxaa jira dhowr maalmood illaa mid ka mid ah cayaaraha la filayo uu yimaado, laakiin ma jeclaan lahayd sida loo rakibo Clash Royale hadda? Waan ku barnaa.
Sida loo beddelo mashiinka raadinta asalka ah ee Safari
Imaatinka macruufka 6, xiriirka ka dhexeeya Apple iyo Google wuxuu umuuqday inuu sii xumaanayo kadib markii la eryay codsiyada ...
Jabsaday Aqoonsiga iPhone Touch oo leh dhoob yar
Dareenka faraha ayaa ah habka ugu aaminka badan ee lagu ilaaliyo iPhone ama iPad-kayga markasta, tan iyo ...
Sida loo arko furayaasha sirta ah ee ku kaydsan Safari
Maalin kasta, gaar ahaan haddii aan maalin badan ku qaadanno meel ka baxsan guriga, waxay u badan tahay in la helo ...
Sida loo Qariyo Apple Music Icon on iPhone
Tan iyo markii la bilaabay Apple Music, adeegga cusub ee muusigga ee qulqulaya ee Apple, si tartiib tartiib ah ayey u soo kordheysay ...
WhatsApp waxay heshaa cusbooneysiin muhiim ah
Ku dhowaad dhammaan wararkii aan ka soo hadalnay waa hore waa la xaqiijiyay
Toddobaadkan waxaan ka ogaanay waxyaabo badan oo ku saabsan iPhone SE, oo hore loo oran jiray iPhone 5se asal ahaanna ...
Waxaan kuu sheegeynaa hadalada xiisaha leh ee Agaasimaha Guud ee Apple ee ku saabsan Apple Car iyo bilaabitaankeeda suurtagalka ah.
Maxaa la sameeyaa haddii aad ku shubto iPhone-kaaga biyaha?
Iphone-kaaga ama mobiilkaaga miyaad ku dhex daadisay biyaha? Soo ogow waxaad u baahan tahay inaad sameyso si aad u qalajiso si ay ugu shaqeyso dhib la’aan kadib markaad qoyso.
Apple Pay waxay timid Faransiiska sanadkan laakiin si tartiib ah oo deggan
Apple Pay waxay imaan doontaa France bisha Sebtember ee sanadkan waxayna lahaan doontaa tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah iyo shan bilood
IPhone 5se ma hagaajin doonto iibka iPhone
Dhowr maalmood ka hor, soo-saareyaasha iPhone 9se cusub ayaa lagu sii daayay 5to5Mac, kaas oo intii aan kari karnay ...
Waxaan ku dhawaaqnay Nofeembar in dhowr bilood Futurama uu dib ugu soo laaban doono shaashadda yar, markan oo ah qaab ...
Apple waxay si rasmi ah jawaabteeda ugu gudbisay Maxkamada Mareykanka si ay ugu hogaansato ...
Google, Twitter, Facebook iyo Microsoft si ay u soo bandhigaan codsiyo ay ku taageerayaan Apple
Ka dib jawaabta rasmiga ah ee Apple ee maxkamada Mareykanka ee ku saabsan codsigii FBI-da ee ahaa in albaabada loo laabo iOS.
Apple waxay rabtaa in sirta iCloud ay noqoto mid aan laga gudbi karin
FBI waxay dooneysaa inay si xor ah u furto aaladaha, laakiin Apple waxay qorsheyneysaa inay abuurto qalab iyo keydinta sirta ah ee loo yaqaan 'iCloud encryption' taas oo noqon doonta mid aan laga gudbi karin xitaa iyaga.
Axadii la soo dhaafey Shirweynihii Dunida ee Mobaylada, Samsung waxay si rasmi ah ugu soo bandhigtay Galaxy S7 cusub iyo Galaxy S7 ...
Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaan ka hadalnay dhowr jeer oo ku saabsan danaha shirkadaha kala duwan ay la wareegeen shirkadda soo saarta ...
Boqolkiiba afartan iyo lix kamid ah 46 jawaab bixiyaasha ayaa aaminsan in Apple ay heysato sabab macquul ah oo ay kaga hortimaado amarka maxkamada.
Sida loo isticmaalo fiilooyinka burcad ama been abuurka ah ee loogu talagalay iPhone ama iPad oo leh iOS iyadoo aan la helin farriinta qalabka aan la oggolaan. Ma isticmaali kartaa qalab been abuur ah?
Netflix waxaa lagu cusbooneysiiyay isugeyn iyo 3D Touch qof walba
Cusboonaysiinta ayaa noo keeneysa autoplay dadka isticmaala macruufka iyo sidoo kale isdhexgalka 3D Touch.
Farriimaha PlayStation waa la cusbooneysiiyay si ay u sii ahaadaan sida xun
PlayStation Messenger waa la cusbooneysiiyey maanta, laakiin way ka xun tahay sidii shalay oo kale.
Qalinka Apple wuxuu si buuxda u shaqeyn doonaa mar kale iOS 9.3 Beta 5
Apple ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay hirgalineyso qaab ay kula socoto Apple Pencil waxayna ku imaan doontaa iOS 9.3 beta 5.
Mighty, iPod Shuffle oo Spotify ku ridaya jeebkaaga
Waxay noqon laheyd qalabka ugu horeeya oo kaliya ee ka ciyaara muusiggaaga Spotify iyada oo aan lagugu xiriirin aaladda moobaylka.
Sida laga soo xigtay khubarada DisplayMate Technologies, shaashadda cusub ee lagu soo daray Samsung Galaxy S7 cusub ayaa ah shaashadda ugu fiican ...
Sida loola socdo iibka barnaamijka App Store
Waqti ka waqti ayaa horumariyayaasha dalabku hoos u dhigaan qiimaha codsiyadooda mararka qaarkoodna xitaa waxay gaaraan ...
Mark Zuckerberg wuxuu ku biirayaa taageerada Apple ee ka dhanka ah Dowladda Mareykanka
Kii ugu dambeeyay ee ku soo biira wuxuu ahaa milkiilaha Facebook oo taageero buuxda siiyay Apple dagaalkaan.
Tim Cook wuxuu ka hadlayaa Apple Car iyo iPhone
Tim Cook ayaa dhowaan wareysi siiyey majaladda Fortune oo uu nooga tago faallooyin wanaagsan
Samsung ayaa mar kale ku guuldareysatay inay cabirto naqshadda Galaxy S7
Mar kale Samsung waxay iska indhatireysaa mabaadi'da aasaasiga ah ee naqshadeynta waxayna ku xirxireysaa isku xirnaanta Samsung Galaxy S7.
Waxaan ku tusineynaa sida si deg deg ah oo raqiis ah loogu rakibo tufaax iftiimisay iPhone 6 ama iPhone 6 Plus.
Kii ugu dambeeyay ee ku biira iOS App Store waa codsi rasmi ah oo Comuniame ah,
FBI-da ayaa sharraxaysa sababta ay u bedeshay Aqoonsiga Apple-ka ee iPhone-ka la qabtay
FBI-da ayaa sheegaysa in kastoo ay heleen gurmad iCloud ay wali u baahan yihiin albaabada dambe si ay u helaan macluumaad dheeri ah.
Baro sida loo rakibo barnaamijyada bilaashka ah ee iPhone-ka iyada oo aan lahayn ama aan lahayn JAILBREAK si aad u soo dejiso barnaamijyada adigoon bixin oo dillaacin taleefanka gacanta ee Apple si aad u rakibto ciyaaraha ipa
Waxaan kuu diyaarineynaa inaadan ka maqnaan hal sheeko oo ka socda Shirweynahan Dunida ee Moobaylka 2016 mahadnaqa caymiskayaga gaarka ah!
Maamulaha Apple ayaa shaaca ka qaaday in FBI-da ay mar hore 'jabsatay' iOS
Aqoonsiga Apple ee iPhone-ka oo uu lahaa mid ka mid ah argagixisada San Bernadino ayaa la beddelay hal mar markii ay dowladdu haysatay.
Apple ayaa bilawday barnaamij cusub si ay u cusboonaysiiso iPhone-ka [US]
Apple ayaa bilowday barnaamij cusub oo ay ku cusbooneysiineyso iPhone-ka. Waxaa la heli doonaa midkood kan ay horay u siiyeen ee ...
Sida loo wanaajiyo WiFi-kaaga adoo badalaya kanaalka router-ka
Waxaan kuu sharxeynaa sida ugu fudud ee aan laheyn codsiyada dibedda ah sida aad u hagaajin karto isku xirka WiFi ee gurigaaga si aad ugu raaxeyso raaxo
Barnaamijka PayPal ee loogu talagalay macruufka ayaa gabi ahaanba dib loo habeeyay
Laga soo bilaabo madax ilaa cirib, cusbooneysiinta PayPal ee iOS ayaa sidoo kale noo keeneysa astaan ​​cusub.
Tani waa sida Apple dib ugu warshadayso iPhone-kaaga markii uu dhinto
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta ku saabsan habka "dib-u-hagaajinta iyo dib-u-warshadaynta" ee ay Apple ku isticmaasho iPhone-ka.
Apple Pay waxay ku daraysaa 40 bangi oo cusub ka hor inta aysan imaan Spain iyo France
Markaad timaaddo Spain, France iyo China, Apple wuxuu ku darayaa 40 bangi oo kale oo la jaan qaada Apple Pay.
Twitter wuxuu hadda kuu oggolaanayaa inaad si toos ah uga duubto fiidiyowga DMs
Twitter ugu dambeyntii wuxuu ku darayaa taageerada wadaagista iyo duubista fiidiyowyada si toos ah qeybta fariimaha tooska ah.
Apple waxay si rasmi ah u bilaabatay Apple Pay ee Shiinaha
Apple Pay waxay si buuxda uga shaqeyneysaa Shiinaha laga bilaabo maanta iyada oo ay la socoto UnionPay.
Apple waxay kajawaabtay FBI-da Codsi ay kuhelayso inay kusheegto iPhone Dambiile Waraaq Furan
FBI-da ayaa ka codsatay Apple inay soo bandhigto softiweer si ay ugu adeegsadaan taleefanka dambiilaha, laakiin Tim Cook iyo shirkadda ayaan fududeyn doonin
Sida loo furo feylka .ZIP ee arjiyada qoraallada
Iyadoo la adeegsanayo macruufka 9.3 iyo cusbooneysiinta dalabyada qoraalada waxaan awoodi doonnaa inaan ku furno feylal leh qaab .ZIP ah dhib la'aan dhib badan ayaan uga mahadcelinayaa casharkaan
1Password waxaa lagu cusbooneysiiyay "qorshe qoys" oo la awoodi karo
App-ka 1Password wuxuu bilaabay qorshe cusub oo reernimo taas oo sahlaysa in la wadaago furaha sirta ah isla markaana lacag lagu keydsado inta ay socoto.
Xalka (loogu talagalay gacmo-gacmeedka) dhibaatada haysata iphone-ka taariikh ahaan taariikh ahaan [video]
Ma jiraa qof ciyaaray kaftanka qosolka ah ee gelinaya iPhone-gaaga taariikh oo kuu qarinaya? Hagaag, ha walwalin, dhibaatadu horeyba waxay u leedahay xal.
Apple iyo Sonos waxay ku xayeysiiyaan isbahaysigooda xayeysiin
Maalmo ka hor waxaan kugu wargalinay dhamaadka wajiga beta ee barnaamijka si dadka ku hadla Sonos ay ula jaan qaadaan ...
Dareeraha kaamerada ee 'Sony iPhone' wuxuu noqon doonaa mid is haysta oo ka jaban
Sony waxay soo saartaa dareemayaasha kaamirooyinka soo saarayaasha badan, oo ay ku jiraan iPhone. Jiilka soo socdaa wuxuu noqon doonaa mid is haysta oo ka jaban.
Mushaharka Apple wuxuu imaan doonaa Faransiiska sanadka 2016 iyo Shiinaha usbuuca soo socda
Imaatinka Apple Pay ee Faransiiska ayaa la xaqiijiyay inta lagu gudajiray qeybtii hore ee sanadka 2016 waxaana imaatinka Shiinaha la filayaa todobaadkan.
Fikrad cusub oo ah iPhone 7-ka aan biyuhu xirin
Mid kale. Naqshadayaashu waxay umuuqdaan kuwa aad ugaxun waligood sidii loogu talagalay soosaarka iPhone 7 ee soosocda kuna saleysan
Apple waxay xaqiijineysaa fashilka taariikhda. Horay ayaad uga shaqeysaa xalka
Guul darrada ah in lebenku qalab iOS ah haddii taariikh cayiman oo ah 1970 la dejiyo waa guul darrooyin halis ah Applena horay ayey uga shaqeynaysay xalka dhibaatada.
Shan siyaabood oo lagu ogaado IMEI-ka iPhone-kaaga si loo xakameeyo haddii ay dhacdo xatooyo ama la siiyo furayaasha moobiilka Apple.
Xusuusnow lambarkaaga sirta ah ee 'WiFi' adigoo adeegsanaya isbadalkan
Xaqiiqdii in ka badan hal munaasabad ayaan u baahanahay inaan ogaano lambarka sirta ah ee xiriirka WiFi ...
Sida loodaro xadeynta waxyaabaha kujira iPad
Actualidad iPad-ka waxaan ku tusaynaa sida aan ugu xadidi karno waxyaabaha laga soo saari karo iPad-kayga.
Sida loogu daro faylka aan la aqrin ee ku jira Boosta
In kasta oo arjiga Boostada lagu maareeyo waraaqaha ku jira macruufka wax badan oo laga rabo dadka isticmaala intensive ...
Falanqeeyayaashu waxay horeyba u tixgeliyeen Jack 3.5mm inuu ku dhinto iPhone 7
Falanqeeyayaashu waxay horey u qaateen in iphone 7 uusan kujirin doonin aalada dhegaha ee 3,5mm.
Facebook Messeneger wuxuu diyaariyaa ikhtiyaar xisaab badan iyo warar dheeri ah
Facebook Messenger waa mid ka mid ah adeegyada farriimaha deg dega ah ee ugu badan ee meeraha laga helo, si kastaba ha noqotee, badiyaa uma hibeyno dad badan ...
Apple waxay u diyaarisaa nooc barnaamij ah barnaamijkeeda Khariidadaha
Apple xitaa waxay soo qaadan doontaa nooc habeenle ah oo ah barnaamijka Khariidadaha ee iOS 10.
Sidee looga fogaan karaa dhibaatada jabinta iPhone-ka taariikh ahaan [Cydia]
Xalay, lamaanahayga Juan gacmihiisa ayuu saaray madaxiisa sababtoo ah cillad cusub oo iOS ah, ...
Sida loo diro feylasha waaweyn adoo adeegsanaya Drop Mail
Mail Drop ayaa ka soo muuqatay shirkii horumarinta ee lagu qabtay 2014 waxayna gacanta ku haysay gacanta ...
Ka taxaddar, khiyaanadan ku saabsan macruufka ayaa ka tagi doonta iPhone-kaaga adeegsiga sida leben!
Cayayaan cusub oo la xiriira taariikhda dejinta ayaa ka tagi kara iPhone-kaaga si aan la loodin karin, waxaan kuu sheegi doonaa sida ay wax u dhacaan iyo sida looga fogaado.
Waa maxay iTunes Gargaare iyo sidee ayuu u naafo yahay?
Ma ogtahay waxa iTunes Caawiyaha loogu talagalay? Ma wax qalad ah ayaad ku helaysaa Windows ama Mac? Baro sida loo joojiyo hawshan haddii ay ku siiso dhibaatooyin ama aadan u adeegsan doonin.
TSMC waxay noqon doontaa shirkada kaliya ee iibisa iphone 7
TSMC waxay si gaar ah u soo saari doontaa Chips-ka A10 ee mustaqbalka Apple iPhone 7.
IOS 9.3 miyuu hagaajiyaa waxqabadka iPhone? Jawaabtu waa haa
Beta-saddexaad ee macruufka 9.3 wuxuu si weyn u hagaajiyaa waxqabadka aaladaha macruufka ee duugga ah oo leh 1GB oo xasuusta RAM ah.
BitTorrent Live wuxuu imanayaa App Store, OTT News ayaa cadeyn ah
BitTorrent waxay tijaabisaa mustaqbalka BitTorrent Live iyagoo bilaabaya codsi loo yaqaan 'OTT News' si loo raaco doorashooyinka Mareykanka.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato qaladka 53
Waa maxay qalad 53? Qalab noocee ah ayey ugu nugul yihiin? Waa maxay sababta dhabta ah? Waxaan ku sharaxeynaa wax walba hoosta.
Final Fantasy IX ayaa hadda laga heli karaa macruufka App Store
Square Enix ayaa sii daayay ciyaarta fiidiyowga caanka ah ee Final Fantasy IX ee loogu talagalay barnaamijka Apple ee iOS.
Doodan waxaan ku taageersanahay iPhone 5se waxaanan si faahfaahsan uga doodayaa sababta aan ugu malaynayo inay boos ku leedahay suuqa maanta.
Sida loogu daro in kabadan hal xisaab Instagram bartaada iPhone-ka
Instagram ayaa ku dhawaaqday in beddelka xisaabaadka ay heli karaan dhammaan adeegsadayaasha. Casharkaan waxaan ku tuseynaa sida loogu daro akoonno badan dalabkaaga.
Hadda waxaad ka iibsan kartaa Apple shaashadda ilaalinta shaashadda iPhone
Isticmaalayaashaas oo doonaya difaac dheeraad ah iphone-yadooda waxay si toos ah uga iibsan karaan dukaamada Apple oo leh adeeg deg deg ah.
Raadi meesha iTunes ku kaydiso cusbooneysiinta iPhone ama iPad ee Mac ama Windows PC oo baro sida loo furo faylasha IPSW si loo cusbooneysiiyo qalabkaaga
Ku soo dejiso Cydia iPhone kasta
Waxaan kuu sheegeynaa sida loo soo dejisto Cydia iyo Ku rakib nooca ugu dambeeyay nooc kasta oo iPhone ah oo la jaanqaadi kara JAILBREAK, oo ay ku jiraan iPhone 4 ama ka hor
Buuqa sharciga ee "qaladka 53", qareennada ayaa dacwad ku soo oogay Apple
Dacwadaha heerka koowaad ee dacwadaha ka dhanka ah Apple waxay bilaabeen inay u soo baxaan "qaladka 53" ee caanka ah ee ka dhigaya aaladaha dayactirka adeegyada aan la oggolaan ee aan la isticmaali karin
Waxaan fileynay usbuucii la soo dhaafay Actualidad iPhone warka horeyba waa rasmi: laga bilaabo maalmaha soo socda ...
Clash Royale wuxuu imaan doonaa macruufka inta lagu jiro Maarso 2016
Ciyaarta cusub ee Supercell, Clash Royale, waxay garaaci doontaa App Store iyo Google Play Store bisha Maarso.
Ku xidho koontadaada 'Spotify' Shazam si aad u dhagaysato heeso buuxa
Shazam ee macruufka waxay la timaadaa awooda isku xirka koontadaada Spotify si aad u dhagaysan karto muusigga lagu calaamadeeyay Spotify ee Shazam.
Isticmaalka Facebook ee safari wuxuu keydinayaa 15% batari
Isticmaalka Facebook ee Safari halkii aad ka isticmaali lahayd barnaamijka macruufka ah ee iOS ayaa naga badbaadin kara ilaa 15% nolosha batroolka.
Sida loo joojiyo soo jeedinta xiriirka ee Mail
Haddii aadan jeclayn fikradda ah soo-jeedimaha xiriirka ee ka muuqda iphone-kaaga, maanta waxaan ku tusinaynaa sida loo joojiyo.
Dib u eegista AirMail, oo ah macmiilka iimaylka ugu sarreeya
Waxaan falanqeyneynaa AirMail, macmiil emayl u ah iPhone oo leh ikhtiyaarro habayn aan xad lahayn iyo naqshad aad u taxaddar badan. Miyay u qalantaa in lagu bixiyo € 4,99?
Fikrad cusub oo iPhone ah oo la yaab leh laakiin aan macquul ahayn
Waxaa jira tusaalooyin qaar ka mid ah fikradaha iPhone-ka ee aad u maleyneyso inaad dooneyso inaad yeelato laakiin aad ayey u yar tahay in Apple ay bilaabi doonto Mid baan ku tusaynaa.
Apple waxay bixisaa adeeg si loogu dabaqo ilaaliyeyaasha shaashadda iPhone-ka ee Japan
Apple waxay bilaabi doontaa inay bixiso adeeg xirfadeed si loogu rakibo iPhone shaashadda ilaaliyayaasha bakhaaradeeda. Gudaha…
Tim Cook wuxuu kala hadlayaa wararka Apple madaxda iyo shaqaalaha
Warbixinta rubuca maaliyadeed kadib, Tim Cook wuxuu la kulmay madaxda kale ee Apple iyo shaqaalaha si looga wada hadlo wararka Apple.
Hadda waad ku wareejin kartaa Tesla Model S adoo adeegsanaya Apple Watch
Shaqada "u yeer" waxay u timaadaa iPhone iyo Apple Watch si loo xakameeyo Tesla Model S.
Ku beddelashada Aqoonsiga Taabashada adeegga aan la oggolaan waxay ka dhigeysaa iPhone-kaaga mid aan waxtar lahayn
Apple waxay xaqiijisay in badhanka badhanka guriga ee adeega aan la ogalayn ay ka dhigayso iPhone-kaaga mid aan waxtar lahayn
IOS 9 ayaa xayiraya dhamaan aaladaha iPhone-ka ee ay ku jiraan qaybo aan laga helin shirkadda Apple ee SAT.
Waxaa macquul ah in Apple ay ku sameyso qalad la mid ah kii iPhone 5se ee uu ku sameeyay iPhone 5c.
Tijaabada cusub ee Twitter: badhan gaar ah oo lagu diro GIF-yada
Twitter-ka waxaa ka socda tijaabooyin cusub. Markan waa badhan cusub oo noo sahlaya inaan wadaagno sawirro aad u xiiso badan.
Talooyin si weyn kor loogu qaado amniga aad iPhone
Waxaan ku siineynaa talooyin si aad si muuqata ugu hagaajin karto amniga koontadaada Apple iyo aaladahaaga (iyo xogta shakhsiga ah).
Nintendo wuxuu isku aaminaa ciyaaraha mobilada marka ay la kulmaan musiibo
Nintendo waxay aragtay in macaashkeedu hoos udhacayo 36% rubucii lasoo dhaafay, rajada kaliya ee ay leedahay waa ciyaaraha mobilada.
Apple Pay waxaa hadda laga heli karaa laba milyan oo dukaanno ah
Shirkadda Cupertino waxay ka digeysaa inay mar horeba suurtagal tahay in loo isticmaalo Apple Pay in ka badan laba milyan oo dukaanno, hase yeeshe, weli waxaan ku sugeynaa Spain.
App Store iyo adeegyada kale ee Apple waxay leeyihiin dhibaatooyin hada
Miyaad dhibaatooyin kala kulantid qaar ka mid ah adeegyada Apple? Adiga kaligaa ma tihid Dhibaatadu waxay ku jirtaa dadka isticmaala adduunka oo dhan.
Patent-ka Apple wuxuu faahfaahin ka bixiyaa Aqoonsiga Taabashada xasaasiga ah ee taabashada. Nabadeey badhanka bilowga?
Patent-ka Apple wuxuu faahfaahin ka bixiyaa Aqoonsi taabasho cadaadis xasaasi ah oo leh tiknoolajiyad la mid ah 3D Touch Ma bilowgii dhammaadka badhanka guriga?
Waxay qaadataa laba maalmood oo keliya in Google ay noqoto shirkadda ugu qiimaha badan
Apple wuxuu ku soo laabtay booskiisa inuu yahay shirkadda ugu qiimaha badan adduunka, Google wuxuu kaliya farxay laba maalmood ka dib hoos u dhac ku yimid saamiyadiisa.
Waxaad ku kordhin kartaa xusuustaada iPhone-ka 16GB illaa 128GB $ 60
In kasta oo Apple ay si fiican kaaga dallacdo kororka xusuusta iPhone-kaaga ee boosteejooyinka oo leh meel badan oo ka mid ah suuqa Shenzhen, waxay ku kacaysaa 60 doollar.
LegbaCore, iibsiga cusub ee Apple ee dhacay bishii Nofeembar
Apple waxay heshay LegbaCore, oo ah shirkad ku takhasustay sameynta shirkado aamin ah, bishii Nofeembar ee sanadkii hore. Miyaynu yeelan doonnaa mustaqbalka macruufka 'iOS' oo ammaan ah?
10 tilmaamood si aad ugula socotid Google Chrome on iOS
Halkan waxaan ku soo bandhigeynaa 10 talooyin si aad si fiican ugu socoto oo aad u isticmaasho Google Chrome biraawsarka moobiilka.
Sidee deegaanku uga shaqeeyaa iOS 9
Adeegyada goobta IOS waxay noqdeen qayb muhiim ah oo nidaamka iyo codsiyada ah. Waxaan ku siineynaa faahfaahinta hawlgalkeeda.
Bose SoundLink Mini II, wanaagsan, qurux badan oo aan ku qaalisaneyn hadalka Bluetooth
Ma waxaad raadineysaa afhayeenka Bluetooth ee iPhone? Soo ogow talobixintayada si aad u doorato qaabka ugu fiican suuqa qiimo aan la diidi karin.
Apple shatiyado shaashad taabasho badan-taabasho ah oo aanan u baahnayn inaan taabanno
Apple waxay sharciyeysay shaashad taabasho badan oo shaqeyn doonta iyadoon loo baahnayn xiriir jireed. Laakiin sidee u cuntaa tan? Wax walba waan kuu sharxeynaa.
Sida loo damiyo muujinta ruxitaanka si loo baabi'iyo macruufka 9
Marka aan ka shaqeyneyno horteena kumbuyuutarkeena iyo xaalad kasta waxaan sameyneynaa isbeddel aan hadhow jeclaan, had iyo jeer ...
Apple waxay horeyba u tijaabineysaa noocyada laba-kamarad ah
Noocyadii ugu horreeyay ee iPhone 7 Plus oo leh laba kamaradood ayaa durba yimid Cupertino si loogu tijaabiyo.
"Apple waa la xukumay." Xarfaha alifbeetada ah ayaa ka sarreeya oo horeyba waa shirkadda ugu qiimaha badan adduunka
Apple hadda ma ahan shirkadda ugu qiimaha badan adduunka. Hadda waa Alphabet, oo ah magaca cusub ee shirkadda horay loogu yaqaanay Google.
WhatsApp ayaa hada gaartay bilyan isticmaaleyaal firfircoon bishii
In kasta oo aad u maleyneyso si kale, in Actualidad iPhone kama soo horjeedno WhatsApp, waxaan si fudud u jecelnahay Telegram oo dhan ...
Force Touch baabuurta? Synaptics waa sidaas
Taabashadu waa meel walba. In kasta oo ay run tahay in iPhone aanu ahayn taleefankii ugu horreeyay ee shaashad leh ...
Maamulaha Porsche: "IPhone-ka waxaa iska leh jeebkaaga, wadada maahan"
Warshadaha baabuurta way kala qaybsan yihiin, qaybo ka mid ah oo taageeraya baabuurta iswada waxaa soo saaray ...
Apple waxay weydiisaneysaa FCC inay aqoonsato qalabka maqalka ee MFi
Apple waxay weydiisatay FCC (Guddiga Isgaarsiinta Federaalka) inay aqoonsato qalabka dhageysiga ee MFi si loo kobciyo hal-abuurnimada marin-u-helka.
Ma rabtaa inaad ku isticmaasho Shift Night in macruufka 9.3 on your Mac? Waxaan ku tusaynaa sida
Haddii aad isku dayday Night Shift-ka macruufka 9.3 oo aad jeceshahay inaad ku isticmaasho Mac-kaaga sidoo kale, waa suurtagal. Waxaan ku barnaa sida loo sameeyo. Aad u fudud.
Apple waxay heshay FlyBy Media, tiknoolajiyad "u aragta" hareeraheeda
Maxay tahay iibsigii labaad ee toddobaadkan, Apple waxay iibsatay FlyBy Media, oo abuureysa barnaamijyo "u arka" wax walba oo ku xeeran. Xaqiiqda Virtual?
Waxay umuuqataa in Apple ay sii wadi doonto sharadka waxbarashada, ama tani waa waxa aan fahanay kadib helitaankeedii ugu dambeeyay: LearnSprout.
Apple CFO Ayaa Sheegtay In Baaritaan Lacag Ah Uu U Dhaxeeyo Yurub Iyo Ireland
Sida laga soo xigtay shirkadda Apple ee CFO, baadhitaanka khidmaddu waa shay ay tahay in la kala saaro Yurub iyo Ireland; Apple si sax ah ayey u shaqeysay.
Sida loo rakibo waxyaabo dheeri ah Kodi oo loogu talagalay Apple TV 4
Waxaan ku sharraxeynaa fiidiyowga sida loogu rakibo addons Kodi jiilka afraad ee Apple TV qaab aad u fudud.
IPhone 7s wuxuu isticmaali karaa lacag bixinta wireless wireless
Apple waxay diyaarineysaa teknoolojiyad u oggolaaneysa in lagu soo dallaco qalab macruufka ah fiilo la’aan iyo meel fog fog sannadka 2017. Miyaynu arki doonnaa lacag-u-qaadashada wirelesska ee iPhone 7s?
In kasta oo xaqiiqda ah in tirooyinka la maareeyay boqolleyda, Apple waxay sii wadaa inay ku korto suuqa, kana badato unugyadii la iibiyey 2014.
Angela Ahrendts waxay ku andacooneysaa inay ula dhaqmaan shaqaalaha Apple Store sida maamulayaasha
Tan iyo markii Angel Ahrendts uu ku soo biiray shaqaalaha Apple isagoo madax ka ah qaybta ...
PR-kii hore ee Apple wuxuu aadaa Twitter
Tan iyo bartamihii sanadkii hore maamulka sare ayaa ku qasbay maamulihii hore ee Twitter inuu is casilo, biyaha ...
Apple ayaa maanta sii deysay beta-kii labaad ee dadweynaha ee OS X 10.11.4
Galabtaan (Isbaanishka) Apple waxay soo saartay beta labaad ee dadweynaha iOS 9.3. Noocaan macruufka ah wuu buuxi doonaa ...
News Pro, barnaamijka cusub ee Microsoft ee loogu talagalay iOS
Microsoft ayaa soosaarey barnaamij cusub oo iOS ah oo loogu magac daray News Pro Talaadadii.Shirkada ayaa ku tilmaamtay barnaamijkan inuu yahay shaqadiisa warbixin kooban
Wax dhibaato ah miyaad ku qabtaa Safari? Adiga kaligaa ma tihid Waxaan ku tusaynaa sida loo saxo
U fiirsashada dhaqanka qariibka ah ee Safari ee iOS iyo OS X? Ha walwalin, adigu kaligaa ma tihid waxaanan kuu soo bandhigeynaa xal ku meel gaar ah.
DLe, RAE-qaamuuska app-ka ee iPhone
Akadeemiyada Boqortooyada ee luqadda Isbaanishka (RAE) waxay bilaabeysaa barnaamij isku dhafan qaamuuskeeda rasmiga ah ee iPhone
Haddii aad ka soo gasho degelkan taleefankaaga iPhone, iPad ama Mac, waad baqi kartaa
Kaftanka cusub ee qaab web-ku-saleysan html wuxuu awood u leeyahay inuu sababo xasillooni darro ku timaadda qalabkaaga oo uu u horseedo inuu noqdo mid aan laga jawaabin ama laftiisa dib loo billaabo.
Apple waxay diyaarinaysaa Muuqaal Waddo u gaar ah
Ma xasuusataa sawirkii hore? Gaariga ayaa la arkay sanadkii la soo dhaafay Apple ayaa horey u xaqiijisay inay ku isticmaali doonto xogteeda khariidadaha Apple. Ma Leedahay Muuqaal Waddo?
Apple wuxuu shatiyadeeyay muraayadaha wareega oo leh cabir yar oo tayo sare leh
Raadinta Apple si ay u hesho kamaradda saxda ah ayaa sii socota. Ilaa iyo inta aan ka ognahay, waxay hadda shatiyeen muraayad cusub oo wareeg ah.
Waxaan sharxeynaa sida loo cabiro batteriga iPhone si uu u sii dheeraado iyo tabaha qaar oo kordhin doona ismaamulka mobilada Apple. Ha moogaan
Warshadaha baabuurta waxay saxayaan: "Apple waxay shaqo fiican ku qabataa gaarigeeda Apple"
Markii wax yar ka hor sanad ka hor ay bilaabeen inay soo baxaan warar xan ah oo sheegaya in Apple ay horumarinayso gaarigeeda casriga ah, ...
Warshaddii Foxconn ee ay Iphone ku urursanayd way gubatay
Mid ka mid ah wershadaha ay isticmaali jirtay shirkadda Foxconn ee Apple ayaa sida muuqata dab qabsaday iyada oo aan loo horseedin masiibo shaqsiyeed
Sida Kodi loogu rakibo Apple TV
Waxaan ku sharaxeynaa sawirada iyo fiidiyowga sida Kodi loogu rakibo Apple TV, oo ah ciyaaryahanka ugu dhameystiran ee qalabka warbaahinta aad heli karto
Sida loo muujiyo ama loo qariyo codsiga iCloud ee ku jira iPhone-keena
Isticmaalayaasha ICloud marwalba way ka qoomameynayaan inaysan haysan codsi ku saabsan iPhone si ay u helaan ...
Tutorial: Tayadoow in aad iPhone si aad u hesho ugu badan ee ay batteriga
Tilmaamahan waxaan ku tusi doonaa sida aad u wanaajin karto nolosha batteriga ee iPhone-kaaga adigoo ka joojinaya waxna ka badalaya qaybaha nidaamka qatar la'aan.
Raadi iPhone-kaygu wuxuu ku hagaajiyaa isticmaaleyaasha iPhone ee la xaday gurigan sabab la'aan
Waxa ugu horreeya ee isticmaalayaashu ay tahay inay sameeyaan marka taleefanka gacanta, iyadoon loo eegin sameynta iyo tusaalaha, waa inuu dhaqaajiyo ...
Netflix wuxuu bilaabaa dagaalka ka dhanka ah isku xirnaanta VPN
Bixiyeyaasha adeegga VPN waxay durbaba ka shaqeynayaan sidii looga hortagi lahaa caqabadaha Netflix soo rogaya.
Ma u baahan tahay shaashad si aad u goyso kaarkaaga SIM oo aad ugu rogto micro SIM ama SIM? Waxaan kuu sharraxeynaa sida loo gooyo talaabo talaabo.
Fikradda xayeysiiska Apple Car: In kabadan gaari
Waxaan u maleynayaa inaysan jirin wax soo saar Apple ah oo aan la imaan fikrad. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan horeyba u haysanay fikradda koowaad ee Apple Car.
IPhone 5se iyo iPad Air 3 ayaa la sii deyn doonaa bisha Maarso, laakiin ma ahan Apple Watch 2
Maaddaama bisha Maarso ay soo dhowaatay, bishii loo maleynayay in Apple ay soo bandhigi doonto qalab cusub, waxyarna ...
Waxaan si qoto dheer u eegaynaa Kiiska Boorsada Maqaarka Mujjo
Kiiska Boorsada Mujjo Leather waa shandad iyo kaar haysta oo dhadhamiya dhadhan fiican, oo laga sameeyay maqaar dabiici ah iyo polycarbonate.
Marka loo eego kiraysiyadii ugu dambeeyay, Apple waxay dhab ka tahay galitaanka suuqa xaqiiqda dhabta ah. Ma arki doonaa muraayadaha Apple VR?